Tag: kutenga vatengi | Martech Zone
Tag: kutenga vatengi
Cheetah Dhijitari: Maitiro Ekubatanidza Vatengi Mune Iyo Trust Economy
Vatengi vakavaka rusvingo kuti vazvidzivirire kubva kune vanoita zvakaipa, uye vakasimudza zviyero zvavo zvezviratidzo zvavanoshandisa mari yavo nazvo. Vatengi vanoda kutenga kubva kumabhureki avo vasingangoratidze mutoro wenzanga, asi vanoteererawo, kukumbira mvumo, uye kutora kwavo zvakavanzika zvakanyanya. Izvi ndizvo zvinonzi hupfumi hwetrust, uye ndechimwe chinhu marangi ese anofanira kuve pamberi pesarudzo yavo. Value Exchange Nevanhu vakafumurwa kune zvinopfuura
Big data haichisiri chitsva mubhizinesi renyika. Mazhinji makambani anozvifunga sega seinotungamirwa nedata; tekinoroji vatungamiriri vanogadzira data rekuunganidza zvivakwa, vaongorori vanopepeta kuburikidza neiyo data, uye vashambadziri uye maneja vechigadzirwa vanoedza kudzidza kubva kune iyo data. Kunyangwe kuunganidza nekugadzirisa yakawanda data kupfuura nakare kose, makambani ari kushaya ruzivo rwakakosha nezve zvigadzirwa zvavo uye vatengi vavo nekuti havasi kushandisa maturusi akakodzera kutevera vashandisi parwendo rwese rwevatengi.